Sakramenta ao amin' ny fiangonana katôlika - Wikipedia
Sakramenta ao amin' ny fiangonana katôlika
(tonga teto avy amin'ny Sakramenta ao amin'ny fiangonana katôlika)
Ny Sakramenta Masina dia fomba ampitana sy anomezana ny fahasoavan' Andriamanitra, izay famantarana (na sembôlin') ny fihavanana eo amin' Andriamanitra sy ny olombelona no sady fitaovana ahatongavana amin' izany. Mandray ny fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy ny olona mandray ny sakramenta.
"Ny sakramenta fito no famantarana sy fitaovana izay amin’ ny alalan’ ireo ny Fanahy Masina no mandrotsaka ny fahasoavan’ i Kristy, ilay Loha, ao amin’ ny Fiangonana Vatany. Ny Fiangonana àry no mirakitra sy mampita ny fahasoavana tsy hita maso ambarany".
Fito ny isan' ny sakramenta ao amin' ny Fiangonana katôlika, dia ireto avy: ny batemy, ny eokaristia, ny konfirmasiona, ny sakramentan' ny fampihavanana, ny fanosorana ny marary, ny fanambadiana, ary ny ordinasiona.
1 Ny sakramenta fito
1.1 Ny batemy
1.2 Ny eokaristia
1.3 Ny konfirmasiona
1.4 Ny sakramentan' ny fampihavanana
1.5 Ny sakramentan' ny fanosorana ny marary
1.6 Ny sakramentan' ny fanambadiana
1.7 Ny ordinasiona
Ny sakramenta fitoHanova
Ny batemy dia fomba andraisana ny olona ho mpikambana ao amin' ny Eglizy katôlika, izay tanterahina amin' ny fampiasana rano natao handena ny loha. Atao amin' ny anaran' ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ny batemy.
Ny eokaristia dia fomba anamasinan' ny pretra ny mofo sy ny divay ary isotroana sy ihinanana izany araka ny nandidian'i Jesoa Kristy tamin' ny niarahany misakafo farany tamin' ny mpianany.
Heverina ho manome hery hijoroana vavolombelona sy mahatonga ny Kristiana ho tonga olon-dehibe ny konfirmasiona na fankaherezana. Hatramin' ny Andro Antenantenany dia miovaova ny taon' ny olona atao konfirmasiona, ka eo anelanelan' ny 7 sy 15 taona izany. Hatramin' ny Kônsily Vatikàna II dia tanterahina amin' ny fotoana maha vanto-jaza ny konfirmasiona. Amin' ny ankapobeny dia tanterahina amin' ny alalan' ny fametrahan-tanana (izay midika fampitana ny Fanahy Masina) sy fanosorana menaka (izay midika fidiran' ny herin' Andriamanitra sy mahatonga ny Kristiana ho olom-boahosotra).
Ny sakramentan' ny fampihavananaHanova
Ny fampihavanana na famitranam-pihavanana na fivalozana dia sakramenta manan-tanjona, dia ny famelan' Andriamanitra ny fahotan' ny olona manao fivalozana. Atao hoe sakramentan' ny kônfesy na sakrametan' ny famelan-keloka na sakramentan' ny fampihavanana na sakramentan' ny fivalozana koa ity sakramenta ity.
Ny sakramentan' ny fanosorana ny mararyHanova
Ny sakramentan' ny fanosorana ny marary, izay atao hoe koa: sakramentan' ny marary na fanosorana farany, dia sakramenta natokana ho an' ny marary sy ireo efa ambavahaonan' ny fahafatesana, izay anomezan' ny Fanahy Masina azy ireo ny fankaherezana sy ny fiadanan-tsaina ary herim-po handresena ny fahasarotana vokatry ny aretina, atao hanampiana azy hahazaka miaritra ny fahoriana amin' ny aretina sy ny fahanterana.
Ny sakramentan' ny fanambadianaHanova
Ny sakramentan' ny fanambadiana na mariazy no mampitambatra ny lehilahy sy ny vehivavy kristiana mba ho mpivady.
Ny ordinasiona na fandraharahana masina no manome fahefana ny diakra sy ny pretra ary ny eveka mba hanatanteraka ny fahefana sy ny asa masina sahaniny, izany hoe hahafahany manome ny sakramenta amin' ny alalan' ny Fiangonana.
↑ Katesizin' ny Fiangonana Katôlika, p. 224.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakramenta_ao_amin%27_ny_fiangonana_katôlika&oldid=1043033"
Dernière modification le 15 Janoary 2022, à 06:47
Voaova farany tamin'ny 15 Janoary 2022 amin'ny 06:47 ity pejy ity.